कारबाही नगरि छाडियो ट्रिपर - Arunkhabar.com
प्रकाशित : ६ कार्तिक २०७६, बुधबार १८:३०
विराटनगर ६ कार्तिक । अवैध रूपमा खोलाको माटो (भरौट) उत्खननमा प्रयोग भएको सवारी साधानलाई कुनै कारवाही नगरि छोडेको पाइएको छ । दुहबी नगरपालिकाको प्रमुख बेदनारयण गच्छदारको निर्देशनमा अवैध उत्खननमा प्रयोग भएको स्काइभेटर र तीन वटा टिपरलाई कुनै कारवाही नगरि छोडेको पाइएको हो ।
दुहबी नगरपालिका – १२ बुगढरी बस्ती र वारी विराटनगर – ४ इकराई बस्ती र केसेलिया खोलाको पुल जोखिममा पार्ने गरि अवैध उत्खनन् भइरहेको अवस्थामा स्काइभेटर सहित मोरङ प्रहरीले सोमबार ७ वटा टिपर र ४ वटा ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिएको थियो । इप्रका दुहबी प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको सवारी साधानलाई आवश्यक कारवाहीको लागि स्काइभेटर सहित ७ वटा टिपर दुहबी नगरपालिका पठाएको थियो । तर, दुहबी नगरपालिका प्रमुख वेदनारयण गच्छदारको निर्देशनमा अवैध उत्खनन्मा प्रयोग भएको स्काइभेट र तीन वटा टिफरलाई कुनै कारवाही नगरी मंगलबार छोडन आदेश दिनु भएको हो ।
केसेलिया खोलाको पुल जोखिम हुने गरि १० देखि १५ मिटर गहिरो खाडल बनाएर बा. १ क ४९६२ नम्बरको स्काइभेटरले खनिरहेको अवस्थामा मोरङ प्रहरीले फेला पारको थियो । उक्त स्काइभेटरले केसेलिया खोला गहिरो खाडल पारेर उत्खनन् गरिएको माटो ७ वटा टिफर र ४ वटा ट्याक्टरले गन्तब्यसम्म पुर्याउने तयारीमा थियो ।
प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको को १ ख ५७०९, ना १ क ६२७१, ना १ क ६२६७, ना १ क ६२७०, को १ क २३७२, ना १ क ६२६९, ना १ क ६२६८ र ना १ क ६२६६ नम्बरको टिफर हो । यी मध्धे चार वटा टिफरलाई जनही ५ हजार रुपैयाँले जम्मा २० हजार जरिवना गरेर छोडेको थियो भने ३ वटा टिफरमा माटो नभएको भन्दै कुनै कारवाही नगरी छोडिएको छ ।
सडक निमार्ण गर्न स्काइभेटर गएकोले कारवाहीको दायरमा नल्याएको दुहबी नगरपालिका प्रमुख गच्छदारले बताउनु भयो । ‘प्रहरीले नियन्त्रण गरेर हामीलाई बुझाएको स्काइभेटर बाटो बनाउन गएको थियो,’ नगरपालिका प्रमुख गच्छदारले भन्नु भयो , ‘त्यही भएर हामीले कारवाही नगरेको हो । ३ वटा टिफरमा माटो नपाएको त्यसलाई कारवाही नगरि छोडिएको हो ।’ माटो भएको चार वटा टिपरलाई नगरपालिकाले न्यून जरिवना लिएर छोडेको छ ।
खोलामा पुगेर रंगेहात अवैध उत्खनन्मा प्रयोग गरिएको स्काइभेट र सवाधारी साधान नियन्त्रणमा लिएर नगरपालिकालाई बुझाउँदा पनि कुनै कारवाही नगरि छोड्दा स्थानियले माटो तस्करका गिरोहसँग जनप्रतिनिधीको पनि मिलेमतो रहेको आशंका व्यक्त गरेका छन् । अवैध उत्खननमा प्रयोग भएका चार वटा ट्याक्टरलाई विराटनगर ४ नम्बर वडा कार्यालयले पनि न्यून जरिवना तिराएर छोडिदिएको छ ।
प्रहरीले स १ त ५४५३, को २ त ५७०४ र को २ त ७१६८ नम्बरको ट्याक्टर ट्याक्टर प्रहरीले विराटनगरको इकराईबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो । यी ट्क्याक्टरलाई जहनी २ हजार रुपैयाँले ८ हजार रुपैयाँ जरिवना गरि छोडेको हो ।
यस अघि सोही स्थानबाट अवैध उत्खननमा प्रयोग भएका टयाक्टरलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक कारवाहीको लागि जिल्ला समन्वय समिति मोरङ पठाएको थियो । गत भदौ २ गते जिससले ४ वटा ट्याक्टरलाई जनही १५ हजार रुपैयाँले ६० जरिवना तिराएर छोडेको थियो ।
विराट एक्स्पोको तयारी पुरा, १ अर्वको कारोबार हुने
विपि प्रतिष्ठानका चिकित्सकहरुद्धारा प्रदर्शन
मोरङमा १९ अर्ब ३७ करोड १२ लाख राजस्व सङकलन
विराटनगर, ९ पुस । चालु आर्थिक बर्षको पाँच महिनामा मोरङमा संघीय सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्वको...
Forzest no rx, buy lioresal. विराटनगर, १२ मंसिर । विना विभागिय मन्त्री एवं वाम गठबन्धनका...